Goono (Af Ingiriis : skirt; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa dhar dumarku ku xidhaan dhexda ilaa lugaha taasi oo ka samaysan dun, cudbi ama harag xoolo. Goonadu waa shay dabacsan oo ka samaysan dun, ama cudbi, ama harag kaasi oo la tolay. Diracu wuxuu ka mid yahay dharka dumarka kaasi oo inta badan loo xidho si jidhka uga difaaco dhaxanta. Goonadu waxay ka mid tahay dharka khaaska u ah dumarka Soomaaliyeed inkastoo ay xidhaan wadano badan oo ku yaala Afrika iyo Aasiya. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta.